1 taona 9 volana lasa izay #626 by degu
Ny lohahevitra dia mihidy.
1 taona 9 volana lasa izay #627 by Gh0stRider203
Tsy azo antoka izay tena mangataka. Ve ianao no mangataka ny Mig-23 manana afterburner?
1 taona 9 volana lasa izay #628 by rikoooo
No tianao ho tonga aho eto aminao hanao hoe "adala?" Satria izany mihitsy ny fomba ny hafatra toa, tsy hoe Miarahaba, ianao tsy nahalala fomba sy ny tsy marina na dia manao didim-pitsarana.
Fotoana mamorona pejy: 0.266 segondra